UMngqithi uthi nguyena owaphendlela uKomphela kwiSundowns - Impempe
UMngqithi uthi nguyena owaphendlela uKomphela kwiSundowns
UManqoba Mgqithi ongumqeqeshi weMamelodi Sundowns usecacise ngesizathu sokulandwa kukaSteve Komphela ukuthi azoqinisa ithimba kubaqeqeshi kuleli qembu laseChloorkop.
UMgqithi utshele abezindaba ukuthi uKomphela akafuhlelwangwa ngabaqashi bakhe kodwa nguye owacela kubo ukuthi bamlandele yena kwiGolden Arrows lapho ekade eyinhloko yabaqeqeshi khona.
Uthi uKompela basuka kude naye, futhi banobudlelwano obuhle.
“Ungumuntu oyingcitha bucopho nonolwazi olunzulu ngebhola futhi ulidlalile ekhaya eNingizimu Afrika naphesheya kwezilwandle,” kuchaza uMngqithi.
“Uhlale ephokophelele ukuthuthukisa umdlalo webhola,” kuqhuba yena. Kuzokhumbuleka ukuthi laba baqeqeshi beSundowns ngaphezu kwezicucu zokuqeqesha bahlome ngeziqu eziphezulu zemfundo zobuthishela kanti uRulani Mokwena yena uhlome ngeSports Science.
UMngqithi uncome indlela ababambisene ngayo wathi yingakho seyisheshe yathela izithelo ezinhle.
Kuzokhumbuleka ukuthi kwaba nokudideka kubathandi bezemidlalo ngesikhathi obengumengameli weSundowns, uPatrice Motsepe ememezela abaqeqeshi abathathu ukuthi yibona abazohola leli qembu ngemuva kokwesula isigubhukane kukaPitso Mosimane owayesethole umsebenzi kwi-Al Ahly eGibhithe.
Okwakuthusa abaningi wukuthi bazosebenzisana kanjani ngoba uSteve Kompela ubeyinhloko yabaqeqeshi kuBafana Bes’thende. Phela kuyaziwa azibusi izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa, ayisaphathwa ke eyezintathu.
Kwaba nongabazane lokuthi ngeke ibekhona impumelelo kulaba baqeqeshi, kodwa amathe abuyele kwasifuba kulabo ababengabaza lesi sinqumo njengoba iSundowns igila izimanga lapha eNingizimu Afrika nasezwenikazi.
UMngqithi ubehambele uhlelo lokwethweswa kwabafundi abaphumelele ukuthola izitifiketizo kuqeqesha kumaTVET eMgungundlovu ngempelasonto. Lolu hlelo luxhaswe yiSASCOC noMnyango weMfundo KwaZulu-Natal.
Previous Previous post: Izidlele amahlanga iPirates kwi-Al-Ahly
Next Next post: Ujabule ngomphumela, kodwa ubefuna amagoli amaningi oweSwallows